Iimpawu zomatshini: 1. I-Brand entsha ye-European design concept kunye nesantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu kunye nokuqina okuphezulu 2. Isakhelo sidityaniswe ngentsimbi ephezulu, enozinzo oluphezulu kunye nobomi obude 3. Ukusebenzisa iteknoloji yepompo ye-servo yamva nje, sebenza ngokufunwa, ukonga umbane kunye nepetroli 4. Inobume bokusebenzisana nabantu kwikhompyuter, ukuchaneka kolawulo oluphezulu kunye nenkqubo efanelekileyo 5. Ukusebenzisa i-workbench yembuyekezo echanekileyo ephezulu, imveliso izinzile ngakumbi Umatshini ipharamitha se...
4500T Steel Door Embossing Umatshini wokwenza
Lo matshini ufanelekile kakhulu kwi-metal door embossing.Isixhobo sinokuqina kwenkqubo elungileyo kunye nokuchaneka okuphezulu, ubomi obuphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu.
Inkqubo yokufaka i-embossing ye-sheet metal parts idibana ne-3 shifts / day production..
800T Ikholamu eZine uMzobo we-Hydraulic Press nge-Moving workbench
Iphepha elinye-inyathelo lomzobo we-hydraulic press sisixhobo sokunyathela sehlabathi jikelele, esisetyenziselwa ukunyathela okubandayo kweshiti elikhulu lesinyithi, ukugoba, i-extrusion, i-flanging, ukubumba, njl. , Ukwakhiwa kweenqanawa, oomatshini bombane, izixhobo kunye namanye amashishini, kunye noshishino lwamandla kunye noshishino lweenqwelomoya kunye namanye amashishini e-metal sheet stretching, ukugoba, ukulinganisa, ukukhupha, ukubumba kunye nezinye iinkqubo.Kukwafanelekile kumsebenzi wokudweba wamaphepha e-alloy ahlukeneyo anamandla aphezulu.
1.Uyilo olupheleleyo lwaseYurophu, ujongo olulungelelanisiweyo
2.Ukukhupha i-inner-stress of welded parts by tempering, uzinzo oluhle
3.Romove irust kunye nesanti-blast kwaye iqatywe ngepeyinti echasayo
4.Adopt iziko lomatshini wepentahedron waseSpain, xa i-clamping inokugqiba yonke imiphezulu yokusebenza eya kuqinisekisa ukuchaneka komgangatho kunye nokuchaneka kwendawo.
I-5.Uyilo lwesakhelo somatshini yinxalenye ebalulekileyo yawo nawuphi na umatshini ngokumalunga nokukwazi ukuvelisa iindawo ezichanekileyo ixesha elide.I-WE67K i-Hydraulic metal 6.plate press brake, i-steel sheet bending machine, i-SS plate press brake Frames, iindawo zendibano kunye nemingxuma yokudibanisa iqhutywe emva kwenkqubo ye-welding, ukuya kwi-60 'kwi-passsing eyodwa.
7.Ukubonelela ngeenkxaso ezintathu zephepha langaphambili , Gqibezela ipeyinti yeNippon Polyurethane.